"DHAAWAC ISKU DHEJIS AH": SAWIR, DARYEEL GURI, NOOCYO KAKOOBAN - SOOSAARKA DALAGGA
Daryeelka guriga ee dhirta Kleistokaktus iyo sawirrada noocyada
Cactus - mid ka mid ah dhirta ugu caansan ee gudaha.
Waxa uu muddo dheer soo jiitay dareenka beeraha ubaxyada badan sababtoo ah ma ahan daryeel adag, qurux qurux badan oo dhif ah, muuqaal qurxoon.
Noocyada hadda jira, Kleistokaktus waa mid caan ah.
"Kleistokaktus" ayaa iska leh cirridka cacti ee lakabaabay afkoda. Markii ugu horeysay waxaa laga helaa suugaanta 1861. Waxa uu ku sharxay khabiirkii Faransiiska Charles Lemer, isaga oo u diray jilib gaar ah.
Magaca ubaxa ma ahayn mid shil ah. Lagu tarjumay luuqadda Laatiinka, macneheedu waa "xiran", "dhow". Magaca ayaa la xiriirta qaabdhismeedka ubaxa, kuwaas oo ah tuubooyin yar yar oo ah 3-9 cm waxayna ku dhow yihiin had iyo jeer waxay ku jiraan booska xiran.
Xiiso leh Dabeecadda, Kleistokaktus wuxuu ku baahsan yahay goobaha dhagaxyada, buuraha Peru, Bolivia, ee ku yaalla bannaanka Ang, Galbeedka Argentina.
Saynisyahanadu waxay leeyihiin 49 nooc oo dhirta ah.
Dhaqanka guriga waxaa inta badan ku koray wakiillada soo socda:
Ubaxa isku laaban. Isku mid ahaanshaha "Silver Candle", "Kleistokaktus Strausii". Dabeecadda, waxay koraa afar mitir. Waxay leedahay stem khafiif ah, qiyaastii 5 cm dhexroorka, sagaal feedh ayaa loo qaybiyaa tubercles yar.
Areola waa xayawaan, ballaadhan, oo leh khafiif ah oo khafiif ah, fiiqan, nabarro fudud, 2-4 cm dheer. Wadanka: Northern Argentina, Bolivia.
Sawirku wuxuu muujinayaa Strauss Kleistocactus oo leh daryeel habboon:
Noocyada dhifka ah ee dhaqanka. Isku mid ahaanshaha: googo-cauda, ​​sigaaboorka brookeae ssp, daboolka foornada (laga bilaabo Laatiinka). Waxaa lagu dhajiyay baaxad aad u ballaaran, balaadhan oo sarreeya, oo gaabis ah ilaa dhamaadka.
Markuu koro, astaamaha ayaa soo laaban kara oo soo noqonaya ama hoos u dhacaya, helaya qaab dhismeed. Si buuxda u daboolay nalalka khafiifka ah. Ubaxa waa dhalaalid, casaan, meel u dhow sare ee xajka.
Sawirku wuxuu muujinayaa "Vilpis Kauda" oo leh daryeel habboon:
Beerto leh asal diineed oo ka kooban 13-14 feedh. Jirka dhalinyarada ayaa marka hore la sameeyaa si toos ah, ka dibna wuxuu bilaabmaa inuu dhaco. Areola si aad ah u xayeysiis ah, oo ku yaalla geesaha feeraha. Maqaalka ayaa si buuxda loogu daboolay maqaar dhaadheer, khafiif ah. Ubaxa waa weyn (ilaa 5 cm.).
Beeraleyda ubaxu waxay u mahadcelinayaan tilmaantan midabka aan caadiga ahayn ee ubaxa. Boorashka ubaxa casaan-guduudan. Kalluunka ayaa udub dhexaad ah, oo aan cagaar ahayn, cagaaran. Dabeecadda waxaa laga helaa waqooyiga Argentina, gobolka gobolka Catamarca.
Sawirku wuxuu muujinayaa "Kleistokaktus Emerald" oo leh daryeel haboon:
Waxaa lagu gartaa dhuuban, laalaaban, dhoobo afargees ah oo gaari kara ilaa hal mitir oo dherer ah iyo 2 cm dhexroor. Laga soo bilaabo kor ku xusan waxaa la daboolay tiro badan, lafdhabarta.
Ubaxyada waa qaab dhismeed, oo leh dabaylaha-casaanka casaanka gudaha iyo casaanka dibadda. Inflorescences waa weyn, gaarey 6 cm.
Sawirka wuxuu ku tusayaa "Kleistokaktus Vinter" oo leh hab wanaagsan
Cactus leh cirro, asal ah oo aad u ballaaran. Gebi ahaanba waxaa lagu daboolay nabaro cad khafiif ah. Nooca ubax badan. Ubaxadu waxay ku dhowyihiin meelaha ugu sarreeya, midab jaalle ah-cagaaran. Wuxuu ku koraa Uruguay, Argentina.
Sawirku wuxuu muujinayaa "Ritter's cleistocactus" oo leh daryeel haboon:
Qalitaanka Cactus, oo leh asalka qiiqa toosan. Top ayaa lagu daboolay qaybo kala duwan oo casaan ah ama casaan cas. Ubaxyada waa tuubo, daboolay qolfaha yar yar, cur wareeg, casaan. Wadanka - degmooyinka koonfurta ee Bolivia.
Sawirka wuxuu ku tusayaa Tupisian Kleistokaktus oo leh daryeel wanaagsan:
Fiiro gaar ah oo la beddeli karo. Maadada waa dhuuban, dheer, ilaa 2.5 cm dhexroor. Waxaa lagu xannibmay lix iyo taban. Si buuxda ayaa loogu daboolay maqaayado dhaadheer oo qotodheer. Ubaxa waxaa ku yaal meel u dhow kan sare, casaan.
Sawirku wuxuu muujinayaa Bauman Kleistocaktus oo leh daryeel habboon:
Inkastoo Kleistokaktus aad u nugul yihiin, waxay u baahan yihiin feejignaan iyo daryeel, ma aha wax adag in la barto sida loo daryeelo warshadda.
Waxqabadyada ka dib iibsashada
Dib u noqoshadu waa tan ugu horreysawaxaad u baahan tahay inaad bilowdo daryeelka saxda ah.
Awoodda iyo substrate ee uu jiray ubax dukaanka, waxaa loo isticmaalaa oo kaliya iibinta.
Ma aha kuwo ku habboon dayactirka dhirta joogtada ah.
Si aad uqardho cakto, waxaad u baahan tahay inaad qaadato dheri cusub (qiyaastii baaxad weyn), dhoobo, ku buuxi substrate cusub.
Waxaa ugu fiican in la iibsado qaas ah gaar ah ee cacti iyo succulents sii kordhaya.
Adiga ayaa diyaarin kara carrada. Si arrintan loo sameeyo, isku dar si isku mid ah sanduuq aan qalafsan, cawska iyo dhulka caleen. Ku dar jajabka iyo laadhuuga lebiska si isku dar ah.
Ka dibna si taxadar leh uga saar qaduuska sheyga hore, ruxin nidaamka xididka. U hubso inaad kormeerto xididada, haddii ay saameeyeen isteerin ama cayayaanka. Markaa kadib waxaad sii wadi kartaa in aad ku beddesho.
"Kleistokaktusy" waa mid aad u fudud. Uma baahnid ilaalin qorraxda tooska ah. Inta badan raaxada ubaxu wuxuu ku yaallaa daaqada u jeedda koonfurta.
Fiiri qaabka iftiinka dayrta iyo jiilaalka.
Inta lagu jiro muddadan, maalmaha badanaa way badan yihiin, roobab. Haddii ay lagama maarmaan noqoto, daryeesho sameynta iftiin macmal ah oo dheeri ah.
Guga iyo xagaaga, caktoosku wuxuu ku raaxeysan doonaa qol leh heerkul diirran, heerkul diirran - 22-26 digrii. Xilliga jiilaalka, waxaa jira waqtiyo nasasho. Heerkulka waa in la yareeyo ilaa 11-14 digrii.
Hoos-u-dhigiddu waa inaanay noqon, sababtoo ah hargabku waxa uu saamayn ku yeelanayaa caafimaadka geedka.
Waa muhiim! Caktoosku ma jecla cabitaanka, isbedel deg-deg ah oo heerkul ah.
Xilliga xagaaga, hawo qalalan, hawo kulul, u qaad warshadda dibedda si uu u kululeeyo qorraxda, hawada, hawada nadiifisa.
Warshadu waxay si fiican ugu habboon tahay gudaha gudaha gudaha hawada qallalan. Qoyaan dheeraad ah looma baahna. Kaliya maalmaha kulul xagaaga, waxaad ku rushaysaa ubax biyo kulul 1-2 jeer toddobaadkii. Waxay yareyneysaa oo ka qaadeysaa boodh.
Inta lagu jiro muddada koritaanka firfircooni waxay u baahan tahay daaweyn joogto ah oo joogto ah.
Isla mar ahaantaana hubi in ciidda si fiican u qalajiyo inta u dhexeysa waraabinta.
Ubaxa waa mid si ka sii fiican u dulqaadan by la'aanta qoyaan inta ka badan xadkiisa.
Nidaamku wuxuu u horseedi karaa qaabka kallana.
Xilliga jiilaalka, cagusku waxtar ma laha.
Jirka dabiiciga ah, ubaxku wuxuu ku koraa carrada oo la gooyey macdanta. Waxaa si fiican loogu talagalay sii kordhaya iyada oo aan Bacriminta.
Haddii aad rabto inaad quudiso geedka, waxaa lagula talinayaa inaad tan sameyso wax ka badan hal mar bishii, keliya guga iyo xagaaga, oo isticmaal bacriminta gaarka ah ee cacti iyo suulin.
Waqtiga ubaxa ee Kleuktokaktus waa guga. Muddadan, waa in ay kordhisaa inta jeer ee la waraabiyo waraabinta. Si aad u bilawdo ubax, waxaa muhiim ah in si habboon loo daryeelo inta lagu jiro xilliga nasashada.
Kleistokaktus waxay u nugul yihiin isu-tallaalidda. Da 'yar yar, waxaa lagu beeray guga hal mar sanadkii, iyo ubax qaangaar ah oo keliya sida loogu baahan yahay (qiyaastii mar 2-3 sano kasta).
Ubax waxaa lagu faafiyaa laba siyaabood: gooyn, miraha.
"Kids" cactus ayaa badanaaba ah. Si arrintan loo sameeyo, si taxadar leh u jooji jirida. U fiirso in ay u baahan tahay in la jebiyo, laakiin aan la gooyin. Markaas la qalajiyey muddo 7 maalmood ah meel mugdi ah, oo qalalan oo lagu beeray substrate dhamaystiran ee cacti iyo succulents. Gooynta waxaa la dhigayaa hal weel oo kasta.
Dareen u yeelo! Waqtiga xididada, waa in ay ku xiran yihiin taageero si ay u go'an yihiin.
Seed abuuray wax yar ka dib, inkastoo mararka qaarkood laga helo dukaamo khaas ah oo leh tilmaamo faahfaahsan oo ku saabsan daryeelka iyo beeraha.
Isaga oo ku walaaq qiyaasta cagaarka. Ka dib markii geedo yihiin la sameeyay, waxay yihiin transplanted galay weelal gooni ah.
Dhibaatooyinka caafimaadku waxay badanaa la kulmaan daryeel aan haboonayn.
Waraabinta xad dhaafka ah waxay keeni kartaa kallana yaryar.
Waa muhiim in la ogaado dhacdadeedii waqtigeeda, beddelidda dhirta.
Marka transplanting xididada si fiican ku dhaqay biyo diiran, si taxadar leh loo nadiifiyo ka soo kallana, qaybo ay saameysey, ku maydheen xal daciif ah ee daloolka potassium.
Of cayayaanka, cactus waxaa inta badan saameeya caarada caarada, dirxi yaryar.
Habka ugu waxtarka badan ee loola dagaalamo - ka shaqeynta kiimikada.
Xilligan, Kleistokaktus wuxuu noqonayaa ubax aad uwanaagsan. Tani waa mid aan caadi ahayn, dhirta dhif ah waxay noqon doontaa quruxda dhabta ah ee gudaha casriga ah ee casriga ah. Inkasta oo ubaxa uu dalbanayo daryeel iyo fiiro gaar ah, barashada daryeelku maaha mid adag.